भारतको चेतावनी,नेपाललाई नाकाबन्दी गर्छौं ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतको चेतावनी,नेपाललाई नाकाबन्दी गर्छौं !
भारतको चेतावनी,नेपाललाई नाकाबन्दी गर्छौं !
काठमाडौँ दूवै देशको आआफ्नो अडान रहेका कारण नेपाल र भारत बीच तातीरहेको सीमा विवादले नयाँ मोड लिन थालेको छ । नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको नयाँ नक्शा प्रति दिल्लीले फेरि आपत्ती जनाएको छ ।
भारतले सीमा विवादीत क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप र जबरजस्ती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल पछि नहटे सन् २०१५ मा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी पुनः निम्तिन सक्ने जनाइएकोे छ । भारतले प्रभावकारी र आक्रमक कदम चाल्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । श्रोत टाईम्स अफ इंडिया